I-SmokeIn: elinye ikhasimende le-GetWeb eligculisekile
Ukubuyekezwa okuhle kwamakhasimende kuzinsiza zethu zeWebhu kuyaqhubeka.
Imibono entshiseko yamakhasimende ethu iphakathi kwezinkuthazo ezinkulu ezisikhuthaza ukuba senze kangcono usuku nosuku. Ukuboniswa kokugcina kokuhlonishwa kuvela Athuke ngaphakathi, isitolo esinezitolo eziningi Ugwayi kagesi.
"Izinsizakalo zewebhu ezilula nezisebenzayo, ezifika emphakathini futhi zilethe emnyango wakho wesitolo". Lapha, kufingqiwe ngamagama ambalwa, ukuvivinya okunikezwe ngumnikazi we-Smoke In Umbukiso wemultimedia, ezinikezelwe kuye isitolo se-e-ugwayi.
I-TrovaWeb Web Services ekusebenzeni kwamabhizinisi endawo: inhlanganisela ejabule futhi ephumelelayo
Lapho evula i-super-stock yakhe isitolo se-e-ugwayi di Messina, umnikazi UCarmelo Cannizzo wayengazi ukuthi unkulunkulu ukhona izinsiza zewebhu ezinikelwe imisebenzi efana neyakho: Amabhizinisi Amancane, Amancane Naphakathi nendawo abadinga ukuzazisa ukuze bakwazi ukufinyelela emphakathini ngokushesha nangendlela efanele. Ubengazi, umnikazi we Athuke ngaphakathi, ukuthi iqiniso elishaqisayo nelisebenza ngamandla kulo mkhakha lalikhona edolobheni lakhe Digital kanye nonkulunkulu izinsizakalo zewebhu zezinkampani nabachwepheshe.
"Imiphumela emangalisayo nokubonakala online engingakaze ngiyilindele"
"Leyo engenze ngakholwa ukuthi ngithenge eyodwa Umbukiso wemultimedia ngebhizinisi lami kwakungaphezu kwakho konke ubuhle besethulo salo nokusebenza kwalo. Bengifuna ithuluzi elilula ongalisebenzisa, ngoba angiqondi lutho ngewebhu. Futhi imibukiso yenziwe ngu I-TrovaWeb babebonakala belungile kimi. Engingakulindelanga nakancane ukusebenza ngempumelelo enkulu kwalezi zibukeli ezisezingeni ubukhona online. Akukhona ukuthi ngivele ngivele ngokusobala ku-inthanethi, kodwa futhi nombukiso wami ukhona Amakhasi angaphambili weGoogle." Kungaleso sikhathi lapho umnikazi Athuke ngaphakathi usebe ngomunye wabathengi bethu abathembekile, isifiso esinamandla se-TrovaWeb engokoqobo futhi umsekeli kuze kube sezingeni lokuncoma nezinsizakalo zethu nakubangane bakhe bebhizinisi.
Tags: Izindaba imibono yezinsizakalo zewebhu izinsiza zewebhu thola